Wasiirka Maaliyadda Oo Tafaasiil Ka Bixiyay Kor U Kaca Dakhliga Miisaaniyada Dawlada Iyo Sida Loo Isticmaalo | Salaan Media
Wasiirka Maaliyadda Oo Tafaasiil Ka Bixiyay Kor U Kaca Dakhliga Miisaaniyada Dawlada Iyo Sida Loo Isticmaalo
July 23, 2013 Hargeysa(SM) – Wasiirka maaliyada Somaliland C/casiis Maxamed Samaale ayaa sheegay in dakhliga dalka soo galaa uu sidii loogu tallo galay ugu dhacdo khasnada dawladda isla markaana aanay jirin haba yaraatee wax laga musuq maasuqaa.
Wasiirku waxa uu sidaasi ku sheegay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay xafiiskiisa kaasi oo uu tafaasiil kaga bixiyay marxaladihii kala duwanaa ee xukuumada madaxwayne Siilaanyo ay u soo martay kobcinta iyo kor u qaadista dakhliga iyo miisaaniyada dawladda.
Wasiir Samaalle oo daba socday eedo ay xukuumadda u jeediyeen golaha la baxay wada tashiga iyo toosinta qaranka, waxa uu tilmaamay in madaxwayne Siilaanyo uu yahay halyaygii taariikhda Somaliland ku galay in uu kursiga madaxtinimada ku haneeyay sideetan cod oo qudha.“madaxwaynahan la doortay ee maanta dalada dalka hayaa waa kii doorashadii madaxwaynaha ee sanadkii 2003-dii markii ay komishankii doorashooyinku ku dhawaaqeen in sideetan cod lagaga badiyay aqbalay ee haneeyay, ma jirto manta adduunka meel ay arrintaasi oo kale ka dhacdo, markaa waa kii sideed sanadood sugayay inta ay doorasho danbe dalka ka dhacayso, maantana doorasho ayuu ku yimid kursiga madaxwayne-nimo oo haddii markii hore isaga la yidhi sideetan cod ayaa lagaaga badiyay doorashadii uu galay ayuu kursiga madaxwayne ku helay, markaa sharcigu wuxuu siinayaa in cidii uu doono uu xukuumadiisa u xusho, cidii uu wasiir ka dhigayo, cidii uu kursiga ka qaadayo, inta uu tirada golihiisa wasiirrada ka dhigayo isaga ayaa awoodeeda leh” ayuu yidhi wasiir Samaale.
Wasiirka maaliyada C/casiis Maxamed Samaale, waxa kale oo uus heegay in dakhliga dawladu uu si aad ah u kordhay muddada saddexda sano ah ee ay xukuumada KULMIYE talada dalka haysay. waxaanu tilmaamay wasiir Saamaale in miisaaniyada dawlada ee sanadkii 2010-kii uu ahaa 310 bilyan oo shillinka Somaliland ah una dhiganta 47 milyan oo dollar, halka sanadkii 2011-kiina ay miisaaniayda dawladu ahayd 529 bilyan oo shillinka Somaliland ah una dhiganta 88 milyan oo dollar, waxaanu sheegay in ku talo galkii miisaaniayda dawlada ee sanadkii 2011-kii ay ka soo xerootay 82 milyan oo dollar isla markaana ay si-dhintay 5 milyan oo dollar.
waxa kale oo uu sheegay wasiirka maaliyadu in ku talo galkii miisaaniayda dawlada ee sanadkii 2012-kii uu ahaa 639 bilyan oo shillinka Somaliladn ah una dhiganta 106 milyan oo dollar isla markaana ay miisaaniaydaasi dhamaanteedba soo baxday, halka miisaaniyada dawlada ee sanadkan 2013-kuna ay tahay 750 bilyan oo shillinka Somaliland ah una dhiganta 125 milyan oo dollar, waxaanu tilmaamay wasiirku in uu ku rejo waynahay in ay lacagtaasi u soo bixi doonto sida loogu talo galay.
Isaga oo arrimataasi ka ahdlayana waxa uu yidhi “Taasi waxay muujinaysaa in khasnada dawlada ay lacag badani gashay saddexdaa sano ee uu KULMIYE xilka hayay, taasi oo aan markii hore ku dhici jirin khasnada dawlada in ay hada si toos ah ugu dhacdo, sida loo isticmaalo lacagta ku dhacday khasnada dawlada waxaa jideeya golaha wakiilada oo iyagu dakhli iyo kharashba ansixiya, oo sida ay dawlada u soo gelayso iyo meelaha ay ku baxaysaba cadeeya. Waxa kale oo xusid mudan in lacagtaasi khasanada dawlad aku dhacday si wanagsan loo isticmaalay, sida mushahar kordhintii shaqaalaha dawlada iyo ciidamada qaranka, macalimiinta dugsiyada hoose oo ay dawladu kafaalo qaaday raashinkooda iyo mushaharkoodaba iyo sidoo kale wax qabadka baladhan ee ay xukuumadu samaysay saddexdaa sano”.
C/casiis Maxamed Samaale Waxa kale oo uu sheegay in miisaaaniyada dawlada ee sanadkan 2013-ka ay ka dhex muuqdaan mashaariic badan oo horumarineed kuwaasi oo dalka qiime wayn u leh, kana mid yihiin derejada ciidamda qaranka isla markaana dhamaanba ciidamada Somaliland la siin doono derejada si uu askari kastaaba mushaharka ugu qaato derejada uu haysto. Isaga oo xusay in askarta ciidamada ee aan weli la siinin derejada la dhamays tiri doono inta sanadka ka hadhay.
Waxa kale oo uu tilmaamay wasiirku in miisaaniyada sanadkan mashaariicda ku jirta ay ka mid yihiim sharuuca wadooyinka wax lagaga qabanayo, kaasi oo ay ku baxayso lacag lagu qadaray 2.2 milyan oo dollar. Iyo horumarinat xanaanada xoolaha, wasaaradda beeraha, ciidanka ilaalada xeebaha oo qalab loo iibinayo iyo samaynta Baasaaboorka cusub ee Somaliland ee E-passport-ga oo dhawaan la bilaabayo samayntiisa. Iyo sidoo kale Dab-demis caasimada loo soo iibinayo.
Hargeisa:Dawlada Hoose Ee Hargeisa Oo Laga Joojiyay Qorshaha Shaqaale Cusub